Realme TechLife Robhoti Vacuum, mune-kwakadzika kuongorora | Gadget nhau
Realme munguva pfupi yapfuura ine chirongwa chinoshamisa chekuburitsa, isu munguva pfupi yapfuura takakuratidza yazvino yepamusoro-yepakati-renji kifaa, iyo Realme GT, icho chave chiri mufaro wevashandisi vazhinji. Panguva imwecheteyo isu takakwanisa kuona kunyangwe smartwatch. Nekudaro, icho chigadzirwa chatinounza kwauri nhasi chingangove chimwe chinhu chawaisatarisira, robhoti yekutsuka.
Realme TechLife Robhoti Vharuvhu ndiko kuburitswa kwechangoburwa kwechiratidzo, irobhoti yekutsvaira iyo inoshamisika nekuita kwayo / mutengo weroIzvo chaizvo zvinotipa isu zvakanaka maficha? Isu tinoongorora zvakadzama iyi Realme robhoti yekuchenesa uye zvese zvimiro zvacho zvakadzama, tsvaga nesu.
Sezvinenge nguva dzose, isu takasanganisira vhidhiyo kumusoro pamusoro pedu chiteshi che YouTube mauri iwe uchave unokwanisa kucherechedza izere unboxing yeiyi Realme robhoti yekuchenesa pamwe pamwe nekuchenesa kwayo uye kurira bvunzo. Tora mukana kunyorera kuchiteshi chedu YouTube uye tisiire chero mibvunzo.
1 Zvishandiso uye dhizaini, zvekare hazvimbokundikana
2 Matangi uye ekuchenesa masisitimu
3 Yekuchaja base, kuzvitonga uye kushanda
4 Simba rekutsvaira uye ruzivo rwekuchenesa
Zvishandiso uye dhizaini, zvekare hazvimbokundikana
Iri zita repamutemo nderiri Realme TechLife Robhoti Vacuum, asi nokutendeseka, kune iyo yese yekuongorora isu tichaidaidza iyo Realme robhoti yekutsvaira hupfumi mukuverenga. Ichi chishandiso chakagadzirwa nemhando dzakasiyana dzeplastiki, sezvaungatarisira. Tiri kutaura nezve chakakura chigadzirwa, Iine masendimita makumi matatu nemashanu pakureba uye masendimita gumi kumusoro, Haisi iyo inonyanya kuenderana pamusika asi nokutendeseka, saizi yacho yakakwana.
Chikamu chepamusoro chakashongedzwa nekoriyumu system, ndege jet-nhema qIchava guruva magineti (yekuvaraidza yemakambani mazhinji ekutsvaira robhoti andisingakwanise kunyatsonzwisisa) uye mabhatani maviri, iyo yeiyo yekuchaja base uye iyo ON / OFF bhatani. Sober asi tsvarakadenga, ngatizvitarisei, zvinotaridzika zvakanaka chero kwese kwese. Yakagadzirwa nepurasitiki uye huremu hwese hwakatenderedza 3,3 kilograms muhuwandu.
Pazasi tinowana mawoko maviri ane mabhureji ekuchenesa anoendesa ivhu kunzvimbo yekumwa, iyo «idler» vhiri iri rinotarisira kuchengetedza chishandiso kumberi, iwo mavhiri maviri akasungwa kuti akunde zvipingamupinyi zvingangoita masentimita maviri, nzvimbo yekukweva nebhurasho rakasanganiswa nekuona zvishoma kwetangi.
Matangi uye ekuchenesa masisitimu
Takawana dhipoziti ye600 ml yakasimba Kune iyo vhezheni iyo chete inosanganisira kushuvira, kana tikatenga (zvakasiyana) iyo yekukwesha kurongedza dhipoziti iyi inoderedzwa kusvika pa350ml. UyeIyo bharashi inochengeta yekumwa yakasanganiswa, isu tine mabara erabha ayo ini andinofunga ndiyo inoshanda kwazvo vhezheni. uye nylon bristles izvo zvichatibatsira kuwana imwe yunifomu mhedzisiro. Zvekuchengetedza bhurasho iri uye zvimwe zvese zvekushandisa mune zvakajairika, chishandiso chepasirese chakabatanidzwa mupakeji.
Iwo maviri erutivi mabhurashi anobatsira kutungamira iyo tsvina, saka yekuchenesa mhedzisiro iri pamusoro zvishoma pane iya yemarobhoti ayo anongova neayo. Iyo ine nyore kutsiva HEPA firita mupakeji, zvisinei, isu hatisanganise parutivi parutivi kana epakati mabrashi, Tichafanirwa kuvawana kunzvimbo dzinowanzoitika dzekutengesa (isu hatizive mutengo wezvipenga panguva yekuongorora).
Kubvisa dhipoziti kuri nyore, chikamu chekumashure chine "bhatani" diki iro kana rikatsikirirwa rinotibvumira kutora tangi yakasimba. Izvo zvinoitika nekubvisa kana kushandura iyo HEPA firita, iyo nenzira, ine yakanyatsoshanda mesh pre-firita.
Yekuchaja base, kuzvitonga uye kushanda
Kana iri yekuchaja base, ndinofanira kutaura kuti ini ndawana yekutanga yakanaka ruzivo. Iyi nheyo ine saizi yakaenzana uye dhizaini, asi mukana uyo mamwe mabhureki anoita kunge anokanganwa. Iyo ine tambo yekuunganidza tambo pazasi iyo ichatibvumidza isu kuti tibatanidze iyo yemagetsi yekubatanidza pasina kubuda, nenzvimbo mbiri dzekudyara kuitira kuti isu tirege kuva nematambudziko mukusarudza nzvimbo yenzira yekuchaja, izvi pasina kupokana neserver inoyedza akati wandei pamwedzi, chinhu chakanakisa.
Kune vamwe vese, iyo Realme robhoti inowana zviri nyore chiteshi chekuchaja, inogona kunge iine chinono chekunonoka kekutanga, asi kana changove chiri pamepu chichava chidimbu chekeke. Yese yekuchaja nguva ichave yakatenderedza maawa maviri ayo 5.200 mAh iyo inotipa kuchenesa pamusoro pemaminetsi makumi masere paavhareji.
Iyo Realme Batanidza app (Android / iOS) inotiyeuchidza nezvaRoborock, kune rimwe divi, ndeimwe yeakanakisa pamusika, saka chiitiko ichi chakanakisa, tinokurudzira kuti utarise vhidhiyo matiri kukuratidzai nhanho dzese dzekumisikidza nhanho uye kunyanya iwe unozogona kuona bvunzo dzeyedzo dzakasiyana.
Simba rekutsvaira uye ruzivo rwekuchenesa
Tine simba rakakura rekukweva re3.000 Pa, Nekudaro, isu tichaenda kusiyanisa pakati peanosvika mana ekuchenesa modhi inowanikwa mukushandisa:
Chinyararire: 500 Pa
Kazhinji: 1.200 Pa
Kunonyanyisa: 3.000 Pa
Kuchenesa kwemazuva ese kunozokwana kupfuura nemodi yacho Zvakajairika, Nekudaro, kana isu tiri kutsvaga mhedzisiro inokwezva kutarisa kwedu, isu tinosarudza iyo modhi Turbo. Iyo yekumusoro modhi ichiri kupfuudzwa maererano neruzha, uko hushoma huchave 55 dB.
Chiitiko ichi chave chakanyanya kufadza nemepu, iyo inomhanya uye inotora kwakakomberedza maminetsi makumi mana kune makumi maviri nematanhatu mita mita yepasi. Iri kuda uye inopa mhedzisiro yekuchenesa inoenderana nyore michina inodhura mazana mashoma emadhora.
Kuenderana ne Alexa neGoogle Mubatsiri
LiDAR yekufambisa system
Ini ndinoratidzira anotevera mashandiro ekushandisa:
Mikana yekuganhurira nzvimbo dzemepu uye chaiwo makamuri
Gadzirisa otomatiki kukweva zvichibva nerudzi rwevhu rakaonekwa
Ini pachangu handina kukwanisa kugadzirisa mutauro kuSpanish, saka ndanga ndichifanirwa kugadzikana nenyaya yekuti wekutsuka vanotaura Chirungu nezwi reAsia. Ini ndakashamisika kuti ishoma "isina kusimba" nezvipingaidzo pane inotodhura, Inowanzo pinda pakati pemakumbo ezvigaro uye kunyangwe pasi pemasofa akakwidziridzwa, chimwe chinhu chakandishamisa zvinofadza.
Iyo Realme TechLife Robhoti Vacuum inodhura ma379 euros chete, kunyangwe parizvino tinogona kungoitenga pane AliExpress nezvimwe zvinopihwa (chenjera netsika) kana iyo Realme webhusaiti. Mutengo unomiririra kuve pakati pe50 / 100 euros yakaderera pane dzimwe nzira dzinopa mhedzisiro yakafanana.
TechLife Robhoti Vacuum
Yakatumirwa pa: 30 June we2021
Kubatanidzwa kwakanaka neRealme Link uye mabasa
Kukweva kwakanyanya chinzvimbo
Kuzvimiririra kwakanaka uye nyore kuchenesa
Haisi kuratidzwa muchiSpanish
Inosanganisira mashoma eparutivi zvikamu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » Realme TechLife Robhoti Vharuvhu, irobhoti inovhenesa yakanakisa yemhando yepamusoro / mutengo